Al-shabaab oo markii ugu horeeysay war cad kasoo saartay doorashada madaxweyne Farmaajo – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Al-shabaab oo markii ugu horeeysay war cad kasoo saartay doorashada madaxweyne Farmaajo
Xarakada Al-shabaab ayaa markii ugu horeeysay war cad kasoo saartay doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo iyo sida ay ula dhaqmi doonaan intii uu xilka haayo, iyagoona dhinaca kale digniin u diray shacabka Soomaaliyeed ee sida weyn isaga u taageersan.
Sheekh Xasan Yacquub Cali oo ka tirsan saraakiisha sare ee Xarakada Al-shabaab ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uu la mid yahay hoggaamiyaashii hore usoo maray dowladda federaalka Soomaaliya, kana darran yahay maadaama uu yahay muwaadin oo ay reer galbeedku soo tababareen.
“Hadii aa nahay muslimiin, waxaan leennahay miisaan aan wax ku cabirno, qof kasta oo khilaafa waxa ay jideeysay shareecadda Islaamka, waan la dagaalameynaa, sidoo kale waxaan shacabka Soomaaliyeed uga digeynaa inay taageero u muujiyaan dowladaasi aan hareer marsan shareecada Islaamka, ciddii taageerta tallaabo ayaa ka qaadi doonnaa” Sidaasi waxaa yiri Sheekh Xasan Yacquub.
Dhinaca kale, Sheekh Xasan Yacquub ayaa sheegay in madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo uu arrimo badan uga khatar badan yahay madaxweynayaashii hore u soo maray dalka Soomaaliya, marka loo eego dhanka dhaqanka iyo diin naceybka.
“Ninka Farmaajo la yiraahdo wuxuu dalka u wadaa kufri iyo gaalnimo, isaga ayaana ka shar badan kuwii hore oo dhihi jiray waxaan ka shaqeeynaynaa Danta, Dalka, Dadka iyo Diinta, balse Farmaajo tabeelihiisa waxaa ugu qoran Danta, Dalka iyo Dadka wuxuu yiri wax Diin la yiraahdo iga fogeeya” Ayaa Sheekh Yacquub hadalkiisa raaciyay.
Ugu dambeyntii, Sheekh Xasan Yacquub ayaa sheegay inay la dagaalami doonaan dowladda uu madaxweynaha ka yahay Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo, illaa iyo inta ay dalka kaga hirgalinayaan shareecadda Islaamka.